Daniely 3: 14-20,91-92,95, - Ny Baiboly
Daniely toko 3, 14-20,91-92,95,
<14Dia niteny Nabokodonozora, ka nanao tamin'ireo hoe: Fanahy inianareo va, ry Sidraka, Misaka ary Abdenegao, no tsy anompoanareo ny andriamanitro sy tsy itsaoahanareo ny sariolona volamena natsangako? 15Ankehitriny, raha vonon-kiankohoka hitsaoka ny sariolona nataoko hianareo, raha vao mandre ny feon'ny anjomara, ny sobaba, ny lokanga, ny samboka, ny valiha, ny farara mbamin'ny zava-maneno isan-karazany... Fa raha tsy mitsaoka azy hianareo, dia hatsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny memy mirehitra afo mivaivay, ka iza moa no andriamanitra hahavonjy anareo amin'ny tànako? 16Fa namaly Sidraka sy Misaka ary Abdenegao, ka nanao hoe: Ry Nabokodonozora ô, tsy misy tokony havalinay anao. 17Raha mahavonjy anay tokoa ny Andriamanitra tomponay, dia hovonjeny amin'ny memy mirehitra afo mivaivay sy amin'ny tànanao izahay, ry mpanjaka ô! 18Ary na tsy hataony aza izany, aoka ho fantatrao, ry mpanjaka, fa tsy hanompo izay andriamanitrao izahay, na hiankohoka eo anatrehan'izay sariolona volamena natsanganao.
19Dia feno hatezerana Nabokodonozora, ary niova tamin'i Sidraka sy Misaka sy Abdenegao ny tarehany. Nanohy niteny indray izy, ka nasainy nohafanaina ny memy impito mihoatra noho ny niheveran'ny olona ny tokony hanafanana azy; 20ary ny miaramila sasany izay matanjaka indrindra amin'ny tafiny, no nasainy namatotra an'i Sidraka, Misaka, Abdenegao, sy hanipy ireo ao anatin'ny memy mirehitra afo mivaivay.
91Talanjona loatra tamin'izay Nabokodonozora mpanjaka, ka nitsangana faingana. Niteny izy ka nanao amin'ireo mpanolo-tsainy hoe: Tsy olona telo lahy nifatotra va no natsipitsika tao anatin'ny memy? Dia hoy ny navalin'ireo ny mpanjaka: Izany tokoa, ry mpanjaka. Ary hoy izy niteny indray: Izaho anefa, indreo, mahita efa-dahy tsy mifatotra, 92mandehandeha ao afovoan'ny afo, tsy misy manino-maninona akory, ary ny fijery an'ilay fahefatra hoatra ny zanak'andriamanitra.
95Niteny Nabokodonozora ka nanao hoe: Isaorana anie ny Andriamanitr'i Sidraka sy Misaka sy Adbenegao, fa naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy sy nandika ny didin'ny mpanjaka, ary nanolo-tena mba tsy hanompo na hitsaoka andriamani-kafa hafa-tsy ny Andriamaniny ihany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2353 seconds